(Axmed Madoobe) Madaxda Dowladda Somaliya ayaa dayacay ammaanka guud ee dalka. – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo ka hadlaayay Magaalada Kismaayo ayaa sheegay in madaxda Dowladda Somaliya ay dayaceen ammaanka guud ee dalka.
Axmed Madoobe wuxuu sheegay in amniga dalka dhan lagu haleeyay ciidamada Midowga Afrika ee Amisom, islamarkaana ay jirto dayacaad dhanka ammaanka ah.
Wuxuu sheegay Madaxda Dowladda inay ku mashquuleen arimaha ku aadan doorashooyinka, islamarkaana la ilaaway masuuliyadii ka saarneyd dhanka ammaanka.
Hogaamiyaha Jubbaland wuxuu cadeeyay Shabaabka inay dib u qabsadeen deegaano ka tirsan Gobolada dalka Somaliya, islamarkaana dib ay u soo noolanayaan
“Al Shabaab meelo kala duwan ayey dib u qabsadeen, waayo ammaanka dhan waxaa lagu halleeyay Amisom oo aan dalka lahayn , maadaama aan dalka loo dhisin Ciidamo u gaar ah.” Ayuu yiri Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe ayaa isweydiiyay “ Intee in la eeg ayeey ciidamada Amisom la dagaalamayaan Shabaab, hadii Amisom dalka ay ka baxaan sow Shabaab dib u qabsan maayo, hadii aanan la helin ciidan Qaran oo tayeysan.
Maamul Goboledyada dalka ka jira iyo Dowladda dhexe ayuu ugu baaqay inay u tashtaan dalka, islamarkaana ciidamada faraha badan ee Maamul Goboledyada iyo kuwa Dowladda dhexe intaba la dhiso oo la qarameyo si Shabaab ay uga saaraan dalka.